FBI-da Oo Ka Shakisan In Ay Furayaan Taleefoonkiisa iPhone X Iyagoo Isticmaalaya Aqoonsiga Face | Wararka IPhone
Ciidamada FBI-da ayaa ka shakisan in ay furaan iPhone X iyagoo adeegsanaya Face ID
Tani waa dacwad ka gudbaysa warbaahinta maanta laakiin taasi waxay dhacday bishii Ogosto ee la soo dhaafay, markii FBI-da kadib baaritaan dheer ay ku sameysay kiis ku saabsan sawir-gacmeedka carruurta, soo galay guriga Grant Michalski, oo leh waaran baaris oo u dhiganta.
Intii lagu guda jiray baaritaanka booliisku waxay qaateen kombuyuutarkiisa gaarka ah iyo iPhone X. Sida iska cad inay galaan iPhone X waxay u baahdeen inay adeegsadaan xoogaa qaab aan rasmi ahayn ama u gudbi qalabka hortiisa eedeysanaha si uu u helo, ugu dambeyntiina ikhtiyaarka labaad wuxuu u muuqdaa inuu yahay waxa ay sameeyeen ciidamada amniga Mareykanka.
Ma helin wax caddeyn ah oo xaqiijin ah oo ku saabsan iPhone X
Runtu waxay tahay kadib "qasbida" furitaanka qalabka, wakiiladu ma awoodin inay helaan Imtixaanno lagama maarmaan ah si loo caddeeyo inuu diray oo helay sawir-gacmeedka carruurta iyada oo loo marayo iPhone X, laakiin suurtagal cusub ayaa loo furay mas'uuliyiinta tan iyo heer sharci ah, ma aha wax la mid ah in lagu qasbo tuhmanaha inuu furo aaladda iyadoo la adeegsanayo faraha. koodh ama aqoonsi Face ah sida wakiiladu sameeyeen markay mari qalabka hortiisa wajiga eedaysanaha.
Laga soo bilaabo qalabka quful waxay la baxeen xoogaa xog ah iyo sawiro markii la furay, laakiin tani waxay fureysaa dood kale oo ku saabsan sharci ahaanta howsha sidaa darteed in badan oo dadka isticmaala ah ayaa aaminsan in tan lagu soo celin karo marka laga hadlayo Aqoonsiga Face ID maadaama uusan sharci ka jirin.
Markii ay noo sheegaan in iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max iyo iPhone XR ay yihiin kuwa ugu amniga badan marka la eego furitaanka iyada oo loo marayo Aqoonsiga Face, waa inaan aaminsanahay waxayna u muuqataa inay jiraan fursado yar oo lagu furo noocyadan iPhone-ka ah haddii aan la wajiga mulkiilaha saxda ah. Xaaladdan oo kale FBI wajiga qofka la xiray in laga furo oo laga helo macluumaadka tuhmanaha sida looga hadlay gudaha Forbes.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone X » Ciidamada FBI-da ayaa ka shakisan in ay furaan iPhone X iyagoo adeegsanaya Face ID
Maaha in laga doodo inay sharci tahay iyo in kale, laakiin in la sameeyo wax kasta oo lagama maarmaan u ah in caddaalad la sameeyo. Filimada xunxun ee caruurta waa dambi weyn. Haddii aadan dambi lahayn waa inaadan muujinin iska caabbinta baaritaanka, waxaa ugu wanaagsan inaad lashaqeyso maamulka.
Ku jawaab Albin
Waxaa laga yaabaa inuusan laheyn sawirro sawiro qaawan oo caruur ah iyo haddii uu la joogo xaaskiisa ama ciddii uu doono xaalad khatar ku jirta oo qofna uusan ku qasbaneyn inuu qarsoodi u ahaado qof kale xitaa haddii aan weli lagu xukumin wax dambi ah.
Hadda waxaad GIFs ugu diri kartaa MD barta Instagram
Dib u eegista bangiga korontada ee 'EasyAcc 20.000 mAh'